के तपाई मोबाईल हराएर तनावमा हुनुहुन्छ ? अब अनलाइनबाटै मोबाई दर्ता गर्नुहोस ! - Experience Best News from Nepal
तपाईंको पनि मोबाइल हराएको छ भने आफैँले अनलाइनमै दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि ईआईआर डट एनटीए डट जीओभी डट एनपी ( eir.nta.gov.np ) मा लग इन गर्नुपर्नेछ । यसरी लग इन गरिसकेपछि त्यसको तलपट्टी रहेको साइन अप बटन क्लिक गर्नुपर्नेछ ।
प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको जानकारी अपुरो रहेमा अनलाइनमार्फत नै सचेत गराउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । यसबाहेक मोबाइल ब्लक गर्नुपर्ने र ट्रयाक गर्नुपर्ने भएमा पनि त्यसको सुविधा यसमा थप गरिएको छ । साभार गोरखापत्र
सोसल मिडियाबाट यसरी पैसा कमाउन सकिन्छ ! जान्नुहोस्